IVisa - isikole solimi se-BLI eCanada
Izinsizakalo ZomfundiI-Visa neCaq
Izinsizakalo zabafundiI-Visa neCaq
Uhulumeni waseCanada ufuna izivakashi ezivela emazweni amaningi zizitholele i-Visa yesikhashana ye-Resident Visa yohambo lwezemfundo oluhlala isikhathi esingangezinyanga eziyi-6, kanye nePhemithi Yomfundi yabafundi abafisa ukufunda eCanada izinyanga ezingaphezu kwezingu-6. Ngaphezu kwalokho, uhulumeni waseQuebec ufuna bonke abafundi bangaphandle bathole I-Certificat d'Acceptation du Québec (CAQ) yabo bonke abafundi abafisa ukufunda eQuebec izinyanga ezingaphezu kwezi-6.
Uhlobo lwe-visa oludinga kuxhomeke ezweni ovela kulo nangesikhathi sobude bakho.
Uma ufisa ukuza eCanada futhi ufunde kuze kube yizinyanga ze-6, ungadinga i-visa yesivakashi noma i-eTA (Ukugunyazwa kwe-Electronic Travel) kuye ngokuthi izwe ovela kulo.
Thola ukuthi udinga i-visa
Uma izwe lakho lihlelwe khona. I-BLI izokusiza kule nqubo futhi izokuthumela amadokhumenti esikoleni afanele ukuhambisa nesicelo sakho.
Imvume Yokufunda ne-CAQ
Uma uhlela ukutadisha e-BLI isikhathi esingaphezu kwezinyanga eziyisithupha, kunemibhalo emibili okufanele ube nayo: Imvume Yokufunda ECanada kanye ne-CAQ (Isitifiketi Sokwamukelwa kwe-Quebec). Uma kunjalo, kufanele ufake isicelo sokuqala se-CAQ. Ngemuva kokuthola i-CAQ yakho (amasonto angama-3-6 bebonke), ungaqala inqubo yokuthola imvume yakho yokufunda yaseCanada.
Indlela yokufaka isicelo se-Canadian Study Permit?
Indlela yokufaka isicelo se-CAQ yakho?
Bobabili ohulumeni baseQuebec nabaseCanada banikeza izimvume zokufunda kubafundi bamazwe omhlaba kuphela lapho bamukelwa ohlelweni olwaziwayo ngokugcwele. Sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.
I-BLI ingakusiza ngenqubo yesicelo sakho uma uyicela.